mushaGENERALNhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura kusununguka kwayo ...
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura kusununguka kwayo ...
05 / 10 / 2019 Levent Elmastaş GENERAL, TURKEY, Nhasi munhoroondo 0
5 October The 1869 Porte ine kambani inokosha neHirsch, ichivimbisa mari ye 10 miriyoni iyo 65 yakazvipira kubhadhara gore rose.
5 Gumiguru 1908 Bulgaria yakazivisa sununguko yayo. 19 Kubvumbi Iine protocol yakanyorwa 1909, yakabvumirana kubhadhara 42 mamirioni mafranc kuAttoman State kune imwe nzvimbo yasara yeRumeli Railways uye zvekare Lineva-Vakarel. 21 mamirioni 500 zviuru zvemafranc ehuwandu uhwu akabhadharwa kuEastical Railways Company.
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura rusununguko rwayo. 19 April 1909 ne protocol yeRumelia ... 05 / 10 / 2012 Porte 5 1869 October, rakachengetedzwa chakaitwa rinokosha chibvumirano ne Hirsch 10 makore akanga avimbiswa mubhadharo mukati mamiriyoni 65 mafranc. 5 October 1908 Bulgaria yakaratidza kuzvimiririra kwayo. Rumeli yomusi April 19 1909 dzakati pamwe navamwe Railways Belova-Vakarel kudivi ravo uyewo vakabvuma kubhadhara muripo hweOttoman Empire 42 miriyoni mafranc kuti mutsetse. I21 mamiriyoni 500 zviuru zveFrank zvechiwero ichi chaibhadharwa kuChina Railroad Company.
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura rusununguko rwayo. 19 Ne protocol yaApril 1909, Rumeli Railways ... 05 / 10 / 2015 Nhasi 5 Gunyana 1869 Gavhuna munhoroondo, nekutengeserana kwakanyanya naHirsch, 10 mamiriyoni emadhora anovimbiswa kubhadhara 65 gore negore. 5 October 1908 Bulgaria yakaratidza kuzvimiririra kwayo. 19 yakabhadhara kubhadhara madhora emamiriyoni e1909 kuUtoman Empire kune chikamu cheRumelian Railways kune rumwe rutivi uye Belova-Vakarel line neprotocol yaApril 42. Vane 21 mamiriyoni 500 zviuru zveFrank zvechiwero ichi zvakabhadharwa kuAsia Road Company.
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura kusununguka kwayo ... 05 / 10 / 2016 Nhasi 5 Gunyana 1869 Gavhuna munhoroondo, nekutengeserana kwakanyanya naHirsch, 10 mamiriyoni emadhora anovimbiswa kubhadhara 65 gore negore. 5 October 1908 Bulgaria yakaratidza kuzvimiririra kwayo. 19 yakabhadhara kubhadhara madhora emamiriyoni e1909 kuUtoman Empire kune chikamu cheRumelian Railways kune rumwe rutivi uye Belova-Vakarel line neprotocol yaApril 42. Vane 21 mamiriyoni 500 zviuru zveFrank zvechiwero ichi zvakabhadharwa kuAsia Road Company.
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura kusununguka kwayo ... 05 / 10 / 2017 Nhasi 5 Gunyana 1869 Gavhuna munhoroondo, nekutengeserana kwakanyanya naHirsch, 10 mamiriyoni emadhora anovimbiswa kubhadhara 65 gore negore. 5 October 1908 Bulgaria yakaratidza kuzvimiririra kwayo. Rumeli yomusi April 19 1909 dzakati pamwe navamwe Railways Belova-Vakarel kudivi ravo uyewo vakabvuma kubhadhara muripo hweOttoman Empire 42 miriyoni mafranc kuti mutsetse. I21 mamiriyoni 500 zviuru zveFrank zvechiwero ichi chaibhadharwa kuChina Railroad Company.
Nhasi munhoroondo: 5 October 1908 kuzvimiririra kweBulgaria 05 / 10 / 2018 Nhasi 5 Gunyana 1869 Gavhuna munhoroondo, nekutengeserana kwakanyanya naHirsch, 10 mamiriyoni emadhora anovimbiswa kubhadhara 65 gore negore. 5 October 1908 Bulgaria yakaratidza kuzvimiririra kwayo. Rumeli yomusi April 19 1909 dzakati pamwe navamwe Railways Belova-Vakarel kudivi ravo uyewo vakabvuma kubhadhara muripo hweOttoman Empire 42 miriyoni mafranc kuti mutsetse. I21 mamiriyoni 500 zviuru zveFrank zvechiwero ichi chaibhadharwa kuChina Railroad Company.
Atabey Ferry Road Yakawedzera uye Yakapetwa
'Mathematics kuKumira' Project muKayseri
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura rusununguko rwayo. 19 April 1909 ne protocol yeRumelia ...
Nhasi muNhoroondo: 5 October 1908 Bulgaria inotaura rusununguko rwayo. 19 Ne protocol yaApril 1909, Rumeli Railways ...
Nhasi munhoroondo: 5 October 1908 kuzvimiririra kweBulgaria
Critical Point yekugadzirwa kwemaMarudzi Kuzvimirira
Chiziviso cheTender: High-Speed ​​Train Project Independent Security Security Service Inotorwa